Damaca Ruushka Ee Dekedda Berbera, Madaxweyne Biixi Oo Ruushka Wax Ku Soo Bartay Iyo Dareenka Maraykanka |
Damaca Ruushka Ee Dekedda Berbera, Madaxweyne Biixi Oo Ruushka Wax Ku Soo Bartay Iyo Dareenka Maraykanka
Dawladda Ruushka ayaa u muuqata inay aad u danaynayso inay saldhig ka samayasto xeebaha Berbera ee Somaliland, haddii ay go’aankaas kaga dhabayso, wuxuu noqonayaa saldhigii u horeeyay ee uu Ruushku Afrika ku yeesho.
Wargeyska caanka ah ee New York Times, ayaa dhawaan qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay “Ruushka oo saamayn sii kordhaysa ku leh Afrika iyo Reer Galbeed badan oo ka werwersan.”, waxaanu warbixintaas ku sheegay in dalka Ruusku uu xidhiidho badan la sameeyayAfrika, kuwaas oo uu kaga kasbaday kalsooni.
Warbixintan waxa si weyn iyaguna u qaadaa dhigay warbaahinta dalka Ruushka oo aad u baahiyay damaca dawladda Ruushka ee saldhig uu ka samaysto Berbera.
Maraykanka ayaa u muuqda inuu si weyn uga walaacsan yahay saamaynta Ruushka ee Afrika, si gaarahna waxay isha ugu hayaan dhaqdhaqaaq kasta oo uu Ruushku doonayo inuu ku soo gaadho xeebaha Berbera ee Somaliland.
Bishii January 30-keedii, Guddida Aqalka Senateka Maraykanka u qaabilsan arrimaha Ciidamada ayaa xogwaraysi qaatay laba saacadood la yeeshay Taliyaha Ciidamada Maraykanka ee Africa GENERAL STEPHEN J. TOWNSEND iyada oo sarkaalkaasi uu si weyn uga dayriyey saamaynta sii kordhaysa ee Ruushka iyo Shiinuhu ay ku yeelanayaan qaaradda Afrika, oo soo muujiyey inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyadaas sii kordhaya.
Taliyaha oo la hadlayey Guddida Ciidamada ee Golaha Senate-ka Maraykanka ayaa sheegay in Ruushka iyo Shiinuhu ay ogsoon yihiin muhiimadda istaraategiyadeed iyo tan dhaqaale ee ay leedahay qaaradda Afrika, wuxuuna sheegay inay haatan sii kordhiyeen sidii ay fursadahaas gacan ugu dhigi lahaayeen isla markaana u labanlaabi lahaayen saamayntooda qaaradda Afrika. Taliyaha ayaa sheegay in Qorshaha Difaaca Qaran ee Maraykanku inuu farayo inay mudnaan siiyaan sidii ay ula beretami lahaayeen quwadahaas oo halis ku ah danaha Maraykanka. “Ruushku wuxuu kor u qaaday oo gaadhsiiyey 200% heshiiyadiisa uu la gelayo qaaradda Afrika iyo iibka hubka, isaga oo qaaradda Afrika ka iibiyey hub gaadhaya illaa 9 Billion oo Dollar, Shirkadaha hubaysan ee Ruushka ayaa iyaguna si weyn saamayn xasilooni darro ugu leh qaaradda …” ayuu yidhi.
Taliyaha ayaa sheegay in hoggaamiye Afrikaan ahi uu dhowaan u sheegay hadalkan “… qof qaraqmayaa (Badda ku dhacay) wuu aqbalayaa cid kasta oo caawimo u fidisa ..” maadaama ay xaddidan tahay taageerada Maraykanka ee uu u fidiyo wadamada Africa si ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ah, taasi waxay keentay inay dalal badani u leexdaan dhinaca kooxaha aan is hayno.
Saraakiil Ruush ah oo la aaminsanyahay inay katirsanyihin sirdoonka Ruushka ayaa dhawaan socdaal qarsoodi ah ku yimid caasimadda Somaliland ee Hargeysa, iyagoo dal-ku-galka ka soo qaatay safaarada Somaliland ee Djibouti. Shabakadda wararka ee Somaliland Chronicle ayaa baahisay magacyada saraakiishan oo ay sheegtay in baasaabooradooda la soo saaray laba bilood ka hor, taas oo u muuqata in loo soo diray socdaalkan gaarka ah.
Xafiiska Somaliland ee Djibouti oo uu Geeska Afrika iskudayay inuu arrintan wax ka weydiiyo ayaanay noo suurto gelin. Magacyada saraakiishan Ruushka ah ayaa lagu kala sheegay Vladmir Babkov, Maksim Grishin, Anton Putekhov and Dmitry Shtanko.
Warar uu Geeska Afrika helay ayaa xaqiijiyay in wefti Somaliland ka socda oo socdaal ku tagay dalka Maraykanka sannadkii 2016 inay xilligaas aqalka Senateka Maraykanka kula kulmeen ugu yaraan masuuliyiinta ugu sarreeya illaa 11 xafiis oo aqalada Congresska iyo Senaterka u qaabilsan arrimaha Afrika iyo Arrimaha Debedda, waxaana xilligaas ay saraakiisha Maraykanku ay weftiga Somaliland la wadaageen dareenka ay ka qabaan saamaynta sii kordhaysa ee Shiinaha iyo Ruushka ee Geeska Afrika, iyaga oo xilligaas aad ugu dheeraaday damaca Shiinaha ee ahaa inuu isku soo fidinayo gobolka Geeska Afrika. Arrimaha ay weydiiyeen weftiga Somaliland waxaa ka mid ahaa, danaynta Maraykanka ee saldhigga Berbera. Waxaana si toosa ay weftiga u weydiiyeen, haddiiba Shiinuhu uu isku fidiyo dalka Djibouti oo halis ku haysa danaha Maraykanka ee gobolka, in Somaliland ay hayso fursad ay u soo bandhigi karto Maraykanka.
Bishii March ee sannadkii 2017, waxa iyaguna socdaal rasmi ah ku yimid Somaliland diblomaasiyiin ka socota safaaradda Ruushka ee Djibouti, waxaanay kulan la yeesheen wasiirkii khaarajiga Somaliland ee xilligas Dr. Sacad Cali Shire. Weftiga ayaa booqday goobaha Berbera ee uu Ruushku dhisay oo u badan goobo milatari.
Geesta kale damaca Ruushka iyo hadal hayntiisa Somaliland oo aan saxaafadda ku cusbayn, ayaa waxa ay hadalhayntooda maantu kaga duwantahay kuwii hore, doorkan waxa talada Somaliland haya Madaxweyne Biixi oo wax ku soo bartay dalka Ruushka, kuna hadla luuqadooda. Sidoo kale waxa isna wasiirka Amniga ah Maxamed Kaahiin Axmed oo isna wax ku soo bartay dalkaas kuna hadla luuqadda Ruushhka. Waxa kale oo golaha wasiirada ee MadaxweyneBiixi hore ugu jiray balse xilka laga qaaday xubno kale oo iyaguna wax ku soo bartay Ruushka.
Diblomaasi reer Somaliland ah oo uu Geeska Afrika, la sheekaystya balse ka cudur daartay in magaciisa la sheego ayaa tilmaamay inay suurtogal tahay in Ruushku ugu soo dhiirado Somaliland si ka duwan sidii uu hore ugu soodhiiran jiray maadaama oo ragga talada Somaliland hayaa ay wax ku soo barteen Ruushka, “Waxay u dhowdahay in Ruushku uu siyaasad firfircoon oo cusub ku soo waajaho Somaliland, waayo waxa hadda Somaliland madax ka ah niman Ruushka ay isfahmi karaan oo ugu yaraan ay ku kaftami karaan afkooda, shaahana ku wada cabi karaan iyagoo kaftamaya.” Sidaas ayuu yidhi diblomaasigani.
Ruushka ayaa hore u joogi jiray saldhiga magaalada Berbera, xilligii ay Somaliland ku jirtay midawgii burburay ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, waxaana xilligaas guud ahaan Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ay xidhiidh soke la lahayd dalweynihii Midawgii Soofiyeeti, iyaga oo tababarada ciidanka iyo saanadda hubkaba ka caawin jiray ciidamadii milateriga ee dalka xoogga ku haystay.
Dareenadan isasoo taraya ayaa ku soo beegmaya, iyada oo wadamada galbeedku aanay muhiimad badan siinin Somaliland iyaga oo xagga dhaqaalaha iyo taageerada siyaasaddaba aad u gacan siiya Dawladda Somaliya, sidoo kale hay’adaha samafalka qaarkood ay yareeyeen mucaawanadii ay siin jireen Somaliland sida hay’adda deeqaha debedda u qaabilsan Maraykanka ee USAID oo aad u yaraysay taageerada ay siiso Somaliland halka ay mashaariicdeeda horumarinta u wareejisay dhinaca Somaliya.